Ahoana ny fomba hahatongavana ho mpahay siansa manam-pahaizana momba ny siansa? - Sekoly teknolojia
Ahoana ny fomba hahatongavana ho mpahay siansa manam-pahaizana momba ny siansa?
Ahoana ny fomba hahatongavana amin'ny mpahay siansa?
Fampianarana fanadinana Software
Data Scientist : Ny Siansa Data dia sehatra iraisam-pifaninanana izay mampiasa sehatr'asa maro samihafa - fandrefesana, fandaharana, fianarana maodely, angona fitrandrahana, ary fanadinana - hifantoka amin'ny fianarana sy fanampiana mahasoa izay azo ampiasaina hanatanterahana safidy momba ny raharaham-barotra fototra. Noho ny fipoahana ny angon-drakitra manerana ny toerana, ny siansa momba ny angona dia nahazo ny toeran'ny maha-mpirotsaka an-tsokosoko indrindra amin'ny fiantsoana mivoatra be sy miharatsy indrindra amin'ny zavatra ho avy. Ny fampodiana amin'ny mpikaroka momba ny angona dia tsy asa tsotra fotsiny satria izy no manery ny manam-pahaizana ho lehibe amin'ny sehatra maro amin'ny sehatra, anisan'izany ny rafitrisa aritmetika, rindrankajy rindrankajy, ny fianarana marina, ny tenim-paritra, ny fandinihan-draharaha, ny tahiry, ny fikarohana. Mba hahatratrarana ireo sehatra samihafa samihafa, dia fototra iray ny fanomanana amin'ny fomba ofisialy amin'ny fanabeazana fototra tsotsotra izay manana ny rafitra tsy maintsy ilaina sy ny fanabeazana ilaina mba hampianarana ireo lohahevitra ireo.
Ny herinandro 12-na ny fivoriana 3-volana avy amin'ny Innovative Technology Solutions amin'ny Data Science dia azo inoana fa ny tsara indrindra ho an'ireo olona te-hiditra ao amin'ny tontolon'ny Big Data Analytics. Ity làlam-pivoaran'ny laboratoara ity dia ahitana sehatra miavaka 12 izay hanamafisana ny lohahevitra tsirairay ao anatin'ireo fepetra voalaza etsy ambany:
Linux sy SQL
Aritmetika sy Statistik
Python sy Scala Programming
Hadoop YARN sy Ambari
Sqoop, Flume ary Kafka
Pig, Hive ary Impala
R Fandaharanasa Fandaharam-potoana na Modely miovaova
Sehatra sy haingana
Modeling amin'ny safidy
Manomboha fianarana milina
Ny tsirairay amin'ireo lohahevitra ireo dia mamaritra Big Data Ny Analytics izay sehatra fampandrosoana tsy misy farany izay mihetsika maneho azy amin'izao fotoana izao. Manomboka manomboka tsy misy fanampiana avy any ivelany ity fampianarana ity mba hampisehoana hevitra manan-danja amin'ny fandrosoana Big Data, raha mbola mitohy amin'ny fianarana mandeha Data Science. Ny rafitra biôlôjia Hadoop dia hita taratra amin'ny antsipiriany mahavariana mba hampiakatra ny mpikambana amin'ny dingana Apache Hadoop ho an'ny Big Data Analytics.
Ity fianarana ity dia ho an'ireo mpirotsaka an-tsitrapo amin'izao fotoana izao izay tena lehibe amin'ny fanadihadiana ara-barotra, nefa mitaky fitarihana sy fanohanana amin'ny hevitra, ohatra, R programina, Ny fianarana milina, ny modely miovaova ary ny statistika. Ireo manam-pahaizana za-draharaha izay mila mijery ny fahaiza-manaony hanomanana ny fanamafisana dia afaka miditra amin'ity fandaharana 3 ity. Ireo mpikaroka momba ny data amin'ny alalan'ity fianarana ity dia haka tahaka koa ny fametrahana ny rafitry ny fahitan'ny Data sy ny fijerena R. Ny fianarana dia hameno ireto manaraka ireto:
R Fandaharan'asa famolavolana sy fametavetana
Data Course Certification Course ao India Nahoana no Data Science?
18 Fanadihadiana sy valiny momba ny siansa malaza indrindra momba ny siansa